လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအစုံ… – Askstyle
အူဝဲကို၁၉၇၇April24မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်…။သူမရဲ့နာမည်ရင်းကအိန္ဒြာကျော်ဇင်ပဲ။ဲသူ့ရဲ့အဖွားငယ်ငယ်ထဲကပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပေါ့…။အူဝဲဆိုတာကတော့သူမရဲ့အဒေါ်ပေးထားတဲ့နာမည်။အဖေကဦးကျော်ဇင်+အမေကဒေါ်မြသီတာ…။မောင်နှစ်မသုံးယောက်အနက်အမကအငယ်ဆုံး။အကိုတစ်ယောက်အမတစ်ယောက်ရှိတယ်အကိုက.မြင့်မိုရ်ကျော်ဇင်အမက.အိကျော်ဇင်(FashionDesignerVIVID)တို့ဖြစ်ကြတယ်….။(သူမရဲ့အကိုကတော့အခုမရှိတော့ဘူးပေါ့)ဒါ့အပြင်သူမကရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ဇေယျရဲ့မြေးလည်းဖြစ်တယ်။စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့. တူမလည်းဖြစ်တယ်။
ဒ့ါပြင်သူမကအလွန်ခက်ခဲပြီးတော်ရုံမတက်နိုင်တဲ့စောင်းတူရိယာကိုတီးပြီးမြန်မာသီချင်ကြီးတွေကိုလည်းသီဆိုနိုင်တယ်လို့.သိရတယ်..။အူဝဲဟာတရုတ်နိုင်ငံရွှေကြက်ဖနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲကိုပထမဦးဆုံး ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့မြန်မာအမျိူးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင် သူမဟာ၂၀၀၀ခုနှစ်ကစလို့….ဇာတ်ဆောင်အမျိူးသမီး အကယ်ဒမီဆုအဖြစ်တစ်ကြိုးစာရင်းတွေ ဝင်ဝင်လာခဲ့တယ်။
အကယ်ဒမီနဲ့မှန်းတိုင်လွဲနေသောသူမဟာ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာတော့ဒါရိုက်တာမောင်မျိူးမင်းရိုက်တဲ့”မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်”.ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ကားပေါင်း၂၇ကားထဲမထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တယ်…။အကယ်ဒမီရပြီးတဲ့နောက်မှာဒါရိုက်တာမောင်မျိူးမင်းဟာမအူဝဲမှာသူနဲ့”နတ်သမီးပုံပြင်”ဇာတ်ကားမှာစတင်ဆုံဖူးကြောင်း…၊သို့သော်ပထမဆုံးနေ့.ဇာတ်ဝင်ခန်းတခုကိုမွန်းတည့်၁၂နာရီကနေညနေ၄နာရီအထိ ရိုက်ကူုးရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါ့မလားဟူ၍ တွေးမိကြောင်း …၊
ဒါပေမဲ့အူဝဲဟာဖြစ်လိုစိတ်နဲ့ကြိုးစားမှုအပြည့်ရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တယ်။အဲ့ကားမှာသူမဟာပြီးခါနီးလေလေActingတွေဟာပိုကောင်းလာလေ.ဖြစ်တဲ့အတွက်အစကနေပြန်ရိုက်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါ့အပြင်သူမနဲ့ကားတွေများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြ်ီးနှစ်တိုင်းလိုလို အကယ်ဒမီမှန်းခဲ့ပေမဲ့ လွဲနေခဲ့ကြောင်း
ယခုဒီမျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်ဇာတ်ကားကတော့သူလူကဲခတ်မှားခဲ့တဲ့အတွက်အကြွေးဆပ်လိုက်တဲ့ကားဟုခံယူပါကြောင်းပြောခဲ့တယ်……..။မအူဝဲဟာPEOPLEMAGAZINEကပေးအပ်တဲ့fashionအကျဆုံးဆုတွေနဲ့….ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဆုတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့တယ်ဒါ့အပြင် Shwe FM 3rd Anniversary ပွဲအတွက်Fashion Award ဆုကိုကြေငြာရန်Skynetမှသူမကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့်​ ထိုဆုကိုသူကိုယ်တိုင် ပဲမထင်မှတ်ပဲရရှိခဲ့တယ်။
အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်ဟာလည်း…အူဝဲဟာအရမ်းကိုActingတော်ပြီးကြိုးစားတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ကြောင်း…စိုးမြတ်နန္ဒာတို့အားအူဝဲကိုအတုယူ၍ကြိုးစားရန်ဆုံးမခဲ့ကြောင်း..အိန္ဒြာကျော်ဇင်တစ်ခေတ်ဆိုတာဟာလည်းတကယ့်ကိုဖြစ်ခဲ့ကြကြောင်းကို Let talk Myanmar အစီစဉ်မှာဖြေကြားခဲ့ဖူးတယ်။အူဝဲဟာအနုပညာရှင်ကြီးများရဲ့ချီးကျူးမှုတွေသာမကပဲတက်သစ်စ.အနုပညာရှင်တို့ရဲ့စံထားအတုယူရတဲ့Idol တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တယ်။
၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုကားပေါင်း၅၇ကားကြားမှရင်ဘတ်ထဲကဓားဇာတ်ကားဖြင့်ခက်ခက်ခဲခဲထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ထိုဇာတ်ကားဟာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဝင်ငွေစံချိန်ချိူးတဲ့ကားကြီးဖြစ်သလိုပရိတ်သတ်တွေဟာကြည့်ပီးသည့်အချိန်မှစ၍ သူမအားအကယ်ဒမီ မှန်းပေးခဲ့ကြသည်….။သူမဟာ
၁. ၁၉၉၆ Miss Christmas ပထမဆု၊၂. ၁၉၉၆ MissCokkine.ပထမဆု၊၃.၂၀၀၄အကောင်းဆုံးအမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု၊၄.People Choiceaward2011၊၅.ThemostPopularCelebrity2011၊၆.ShweFM3rdAnniversaryFemaleFashionAwards၊၇.၂၀၁၇အကောင်းဆုံးအမျိူးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု၊၈.ပရိတ်သတ်တွေကပေးတဲ့မဲအများဆုံးနဲ့၊မျက်လုံးအလှ၊နှုတ်ခမ်းအလှပိုင်ရှင်ဆု၊၉.Prideofmyanmar (entertainment)ဆု
ချစ်သောEainniesများအတွက်ဇာတ်ကားများကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးရိုက်ကူးပေးနေ၍ပိုချစ်ရပါတယ်သူမရဲ့.ရုံတင်ရန်ကျန်ရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့၁.ရူးအောင်ချစ်မယ့်လူ၊၂.အမျှအမျှ၊၃.ကြိုးဖုန်း၊၄.ကျွန်မအချစ်ဆုံးယောကျာ်းသုံးယောက်၊၅.ညစ်တွန်း၊၆.အာဒံများနဲ့နံရိုးများ၊၇.တနေ့ရွှေတနေ့ငွေ၊၈.အချိူဆုံးအချစ်အပြင်းဆုံးအဆိပ်၊၉.လေဒီဒိန်းဂျား၊၁၀.အချစ်ဘယ်သူ့ပုံမှာတုန်း၊၁၁.Frequency၊၁၂.မြန်မာပေါကားများရပ်(ဧည့်သည်)…စတဲ့ကားတွေဟာရုံတင်ရန်ကျန်ရှိသေးတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာလည်းကမ်းလှမ်းမှုပေါင်းများစွာနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ ချစ်ရသောOur Princess Eaindra Kyaw Zin
Credit: Queen Snow
အူဝဲကို၁၉၇၇April24မှာမှေးဖှားခဲ့တယျ…။သူမရဲ့နာမညျရငျးကအိန်ဒွာကြျောဇငျပဲ။ဲသူ့ရဲ့အဖှားငယျငယျထဲကပေးခဲ့တဲ့နာမညျပေါ့…။အူဝဲဆိုတာကတော့သူမရဲ့အဒျေါပေးထားတဲ့နာမညျ။အဖကေဦးကြျောဇငျ+အမကေဒျေါမွသီတာ…။မောငျနှဈမသုံးယောကျအနကျအမကအငယျဆုံး။အကိုတဈယောကျအမတဈယောကျရှိတယျအကိုက.မွငျ့မိုရျကြျောဇငျအမက.အိကြျောဇငျ(FashionDesignerVIVID)တို့ဖွဈကွတယျ….။(သူမရဲ့အကိုကတော့အခုမရှိတော့ဘူးပေါ့)ဒါ့အပွငျသူမကရဲဘျောသုံးကြိပျဝငျတဈဦးဖွဈတဲ့ဗိုလျဇယေရြဲ့မွေးလညျးဖွဈတယျ။စာရေးဆရာကွီး ဒဂုနျတာရာရဲ့. တူမလညျးဖွဈတယျ။
ဒ့ါပွငျသူမကအလှနျခကျခဲပွီးတျောရုံမတကျနိုငျတဲ့စောငျးတူရိယာကိုတီးပွီးမွနျမာသီခငျြကွီးတှကေိုလညျးသီဆိုနိုငျတယျလို့.သိရတယျ..။အူဝဲဟာတရုတျနိုငျငံရှကွေကျဖနိုငျငံတကာရုပျရှငျပှဲကိုပထမဦးဆုံးဖိတျကွားခွငျးခံရတဲ့မွနျမာအမြိူးသမီးတဈယောကျဖွဈတယျ။ဒါ့အပွငျ သူမဟာ၂၀၀၀ခုနှဈကစလို့….ဇာတျဆောငျအမြိူးသမီး အကယျဒမီဆုအဖွဈတဈကွိုးစာရငျးတှေ ဝငျဝငျလာခဲ့တယျ။
အကယျဒမီနဲ့မှနျးတိုငျလှဲနသေောသူမဟာ၂၀၀၄ခုနှဈမှာတော့ဒါရိုကျတာမောငျမြိူးမငျးရိုကျတဲ့”မကျြနှာမြားတဲ့ကောငျးကငျ”.ရုပျရှငျကားကွီးနဲ့ကားပေါငျး၂၇ကားထဲမထိုကျထိုကျတနျတနျရရှိခဲ့တယျ…။အကယျဒမီရပွီးတဲ့နောကျမှာဒါရိုကျတာမောငျမြိူးမငျးဟာမအူဝဲမှာသူနဲ့”နတျသမီးပုံပွငျ”ဇာတျကားမှာစတငျဆုံဖူးကွောငျး…၊သို့သျောပထမဆုံးနေ့.ဇာတျဝငျခနျးတခုကိုမှနျးတညျ့၁၂နာရီကနညေနေ၎နာရီအထိ ရိုကျကူုးရတဲ့အတှကျ ဖွဈပါ့မလားဟူ၍ တှေးမိကွောငျး …၊
ဒါပမေဲ့အူဝဲဟာဖွဈလိုစိတျနဲ့ကွိုးစားမှုအပွညျ့ရှိတာကိုတှရေ့တဲ့အတှကျဆကျပွီးရိုကျကူးခဲ့တယျ။အဲ့ကားမှာသူမဟာပွီးခါနီးလလေေActingတှဟောပိုကောငျးလာလေ.ဖွဈတဲ့အတှကျအစကနပွေနျရိုကျခငျြစိတျတောငျပေါကျခဲ့တယျလို့ပွောခဲ့တယျဒါ့အပွငျသူမနဲ့ကားတှမြေားစှာရိုကျကူးခွဲ့ပီးနှဈတိုငျးလိုလို အကယျဒမီမှနျးခဲ့ပမေဲ့ လှဲနခေဲ့ကွောငျး
ဟာPEOPLEMAGAZINEကပေးအပျတဲ့fashionအကဆြုံးဆုတှနေဲ့….ပရိတျသတျစိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံးဆုတှကေိုလညျးရရှိခဲ့တယျဒါ့အပွငျShweFM3rdAnniversaryပှဲအတှကျFashionAwardဆုကိုကွငွောရနျSkynetမှသူမကိုဖိတျကွားခဲ့ပမေယျ့ ထိုဆုကိုသူကိုယျတိုငျ ပဲမထငျမှတျပဲရရှိခဲ့တယျ။
အကယျဒမီမြားရှငျရနျအောငျဟာလညျး…အူဝဲဟာအရမျးကိုActingတျောပွီးကွိုးစားတဲ့မငျးသမီးဖွဈကွောငျး…စိုးမွတျနန်ဒာတို့အားအူဝဲကိုအတုယူ၍ကွိုးစားရနျဆုံးမခဲ့ကွောငျး..အိန်ဒွာကြျောဇငျတဈခတျေဆိုတာဟာလညျးတကယျ့ကိုဖွဈခဲ့ကွကွောငျးကို Let talk Myanmar အစီစဉျမှာဖွကွေားခဲ့ဖူးတယျ။အူဝဲဟာအနုပညာရှငျကွီးမြားရဲ့ခြီးကြူးမှုတှသောမကပဲတကျသဈစ.အနုပညာရှငျတို့ရဲ့စံထားအတုယူရတဲ့Idol တဈယောကျအဖွဈလညျး သတျမှတျခွငျးခံရတဲ့ပညာရှငျဖွဈတယျ။
၂၀၁၇ခုနှဈအတှကျပေးအပျခဲ့တဲ့အကောငျးဆုံးအမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆုကိုကားပေါငျး၅၇ကားကွားမှရငျဘတျထဲကဓားဇာတျကားဖွငျ့ခကျခကျခဲခဲထိုကျထိုကျတနျတနျနဲ့ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိရရှိခဲ့ပွီးဖွဈတယျ။ထိုဇာတျကားဟာနှဈတဈနှဈရဲ့ဝငျငှစေံခြိနျခြိူးတဲ့ကားကွီးဖွဈသလိုပရိတျသတျတှဟောကွညျ့ပီးသညျ့အခြိနျမှစ၍ သူမအားအကယျဒမီ မှနျးပေးခဲ့ကွသညျ….။သူမဟာ
၁. ၁၉၉၆ Miss Christmas ပထမဆု၊၂. ၁၉၉၆ MissCokkine.ပထမဆု၊၃.၂၀၀၄အကောငျးဆုံးအမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆု၊၄.People Choiceaward2011၊၅.ThemostPopularCelebrity2011၊၆.ShweFM3rdAnniversaryFemaleFashionAwards၊၇.၂၀၁၇အကောငျးဆုံးအမြိူးသမီးဇာတျဆောငျဆု၊၈.ပရိတျသတျတှကေပေးတဲ့မဲအမြားဆုံးနဲ့၊မကျြလုံးအလှ၊နှုတျခမျးအလှပိုငျရှငျဆု၊၉.Prideofmyanmar (entertainment)ဆု
ခဈြသောEainniesမြားအတှကျဇာတျကားမြားကိုလညျးအတတျနိုငျဆုံးရိုကျကူးပေးနေ၍ပိုခဈြရပါတယျသူမရဲ့.ရုံတငျရနျကနျြရှိတဲ့ဇာတျကားတှကေတော့၁.ရူးအောငျခဈြမယျ့လူ၊၂.အမြှအမြှ၊၃.ကွိုးဖုနျး၊၄.ကြှနျမအခဈြဆုံးယောကျြားသုံးယောကျ၊၅.ညဈတှနျး၊၆.အာဒံမြားနဲ့နံရိုးမြား၊၇.တနရှေှ့တေနငှေ့ေ၊၈.အခြိူဆုံးအခဈြအပွငျးဆုံးအဆိပျ၊၉.လဒေီဒိနျးဂြား၊၁၀.အခဈြဘယျသူ့ပုံမှာတုနျး၊၁၁.Frequency၊၁၂.မွနျမာပေါကားမြားရပျ(ဧညျ့သညျ)…စတဲ့ကားတှဟောရုံတငျရနျကနျြရှိသေးတဲ့အပွငျလကျရှိမှာလညျးကမျးလှမျးမှုပေါငျးမြားစှာနဲ့အောငျမွငျနတေဲ့ ခဈြရသောOur Princess Eaindra Kyaw Zin